Imbali yeNkampani - Anshun AKF Medical Technology Co, Ltd.
UDisemba 2019 ~ Januwari 2020
Xa abantu kwilizwe liphela bonwabile ukulungiselela amalungiselelo ombutho wonyaka omtsha, idabi liza ngokuzolileyo kwihlabathi liphela, lihlasela ilizwe le-China iphela. Ngaxa lithile, abantu abaninzi babesulelekile sesi sifo, kwaye ilizwe liphela laphakuzela. saqala ukuthintela ubhubhane, kwaye bonke abantu bavalelwe.
Ekuqaleni kukaJanuwari 2020
Iinkokeli zeshishini zixhalabile malunga nophuhliso lobhubhane. Inkampani ichaphazelekayo malunga ne-motherland kunye nabantu. Kwimeko yokuqhambuka kobhubhani, kukho oogqirha nabongikazi abanxibe i-gown emhlophe kwiphondo ngalinye kunye nokubuyela umva kwakhona, i-VoW ukuphumelela imfazwe yobhubhane.
Phakathi enyangeni kaJanuwari 202
Kwanda ubhubhane. Nangona kunjalo, onke la mazwe alwa kunye nentliziyo nomphefumlo wethu. Ukuba kukho nabuphi na ubunzima kwicala elinye, iya kuxhaswa ngamacala onke. Iingcali kwezonyango zazisile ukuba ukunxiba imaski kunokuthintela ngokufanelekileyo ubhubhane. Iinkokheli zenkampani zifuna ukujoyina ekulweni ubhubhane kwaye zenze igalelo elikhulu emfazweni.
Ukuphela kukaJanuwari 2020
Umphathi wenkampani uthathe isigqibo sokutshintsha isicwangciso seshishini sonyaka olandelayo. Usebenzise iimali ebezikade zisetyenziswa ukwandisa isityalo kunye nokusetyenziswa gwenxa kwe-gen-gency gwenxa, ukucoca isityalo kwimveliso yemaski, kwaye iimali zisetyenziselwe ukuthenga oomatshini abatsha kunye nezinto zokuvelisa. sifuna ukunceda ukulwa ubhubhane. Emva koko yonke inkampani yaqala ukulungiselela ubhubhane wokulwa.
Ekuqaleni kukaFebruwari 2020
Sizilungiselele zonke ezi zinto zivelisa imveliso kunye nemveliso, Kwaye umatshini wokwenza imaski ubhukishwe ngempumelelo, Bonke abasebenzi beenkampani zethu bakulungele ukuvelisa imaski yokulwa ubhubhane.
11Ngomhla kaFebruwari 2020
I-Anshun Health kunye neTekhnoloji yoNyango Co., Ltd. yasungulwa ngokusesikwenib Inkampani ifumene izinto zonyango, imveliso yemvume, iphepha-mvume lezempilo, njl.
Phakathi kwinyanga kaFebruwari 2020
Ibhetshi yokuqala yoomatshini bokuvelisa imaski ifike kumzi-mveliso, kwaye siqala ukuvelisa into elahlwayo yobuso obusetyenziselwa ukulwa ubhubhane.
23ti ngo-Matshi 2020
Isigqumathelo esilahlayo esikhuselayo kunye nemaski ye-Kn95 eveliswe yi-AKF ziye zakulungela ngokomgangatho wovavanyo we-GB2626- 2006.
28ti ngo-Matshi 2020
Isigqumathelo esilahlwayo esiveliswe yi-AKF sifumene isiqinisekiso semigangatho ye-CE. Imaski ye-Kn95 eveliswe yi-AKF ifumene isiqinisekiso semigangatho ye-CE
Phantsi kobunkokheli obunobulumko benkosi, inkampani inyuse imigca yemveliso kunye neemaski ezikhuselayo ezithunyelwa ngaphandle ngokuqhubekayo zokulwa ubhubhane. Iimaski zethu zidlale indima ebalulekileyo kwitshayina iphela.
Ukuphela kuka-Matshi 2020
Umthamo wemveliso yethu unyuswe ukusuka kumawaka okuqala amashumi ngosuku ukuya kwi-300-500 lamawaka / ngosuku, kwaye amandla emveliso asakhula. Iimaski zethu zeAKF zisetyenziswe ngokubanzi ezikolweni, kwiindibano zocweyo zemveliso, en-terprises, izibhedlele, indawo ezinobhubhane ezinzima njalo njalo.
Inkampani yethu yaqala ukwamkela abathengi bokuthumela ngaphandle, kunye neminikelo ethile yasekhaya ngexesha elifutshane, iimveliso ze-mask ze-AKF zifunyenwe kumazwe amaninzi nakwimimandla kwihlabathi liphela, kubandakanya iYurophu, iJamani, i-United Kingdom, i-Australia, ne-Russia, ne-Hong Kong njl. Idlale indima ebalulekileyo ngexesha lokuqhambuka kwesifo.
Okwangoku, imeko yase China ibizinzile kakhulu, kodwa umgca wethu wemveliso awunakumiswa, kwaye uthintelo lobhubhane alunakukhululeka. Sifuna ukunceda abahlobo kunye noodade abavela kwihlabathi liphela ukuba balwe nalo bhubhane kunye. Ikamva liya kuba ngcono.